Kanagawa စီရင်စုရှိကွင်းဆင်းလုပ်ငန်း - အကယ်၍ သင်သည်အလုပ်တစ်ခုရှာနေလျှင် [Genvers]
Kanagawa စီရင်စုတွင် site ပေါ်တွင်စုဆောင်းမှု
[စာမျက်နှာ ၄၉ ခု] Kanagawa စီရင်စုနယ်၏လယ်ကွင်းစုဆောင်းမှုနှင့်အချိန်ပိုင်းအလုပ်အရခေါ်ယူခြင်း။ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းများတွင်အဓိကထားသောအလုပ်အမျိုးမျိုးကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။သင်၏လက်၌အလုပ်တစ်ခုရပြီးသင်၏အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းမှုကိုပြန်လည်လုပ်ဆောင်ပါ။Takano Doken Co. , Ltd. , ပထမ Ken-O အမြန်လမ်း
45 ကိစ္စKanagawa စီရင်စုတွင်အလုပ်တစ်ခုရှိသည်။ (၁-၃၀)
Ishige Formwork Co. , Ltd. အတွက်အလုပ်များဟုတ်လား
Seiyo Giken Co. , Ltd.
[Seal / Glazier] သင်သည်အတွေ့အကြုံနည်းပါးသော်လည်းစိတ်ငြိမ်သက်မှုနှင့်ငွေအမြောက်အများရရှိနိုင်သည်။
[အလုပ်အပြီးသတ်] Glass ကို
◆နေ့စဉ်လစာ [အစပြုသူ] ယန်း ၁၀၀၀၀ မှစတင် [အတွေ့အကြုံရှိသူ] ယန်း ၁၃၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ * * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ကိုစဉ်းစားသုံးသပ်ပါမည်။ မင်းရဲ့ကြိုးပမ်းမှုအရမင်းလစာကိုဘယ်အချိန်မဆိုမြှင့်မယ်။
anto တိုကျို၊ ချီဘ၊ စီတာမာ၊ ကန်တိုဝါရှိစီရင်စုဒေသ၊ ယိုကိုဟားမားမြို့တော်ဗဟို၊ ကန်နက်ဝါစီရင်စုရှိနေရာတစ်ခုစီသည်ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်စီး။ သွားလာနိုင်သည်။
Seiyo Giken Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
Oto Kogyo Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
Rise Home Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ဟုတ်လား
အချိန်ပိုမရှိဘူး "" အလုပ်တွေအများကြီး! ] သင့်တွင်အိမ်ရှိလျှင်ပင်စိုးရိမ်စရာမရှိပါ☆ "အဆောင် (ကုမ္ပဏီအိမ်ရာ) ပြီးပြီ။ space နေရာလွတ်ရှိသည်။တစ် ဦး တည်းနေထိုင်ရန်ကျေးလက်ဒေသမှလျှောက်လွှာများကိုလည်းကြိုဆိုပါသည်
Tobi လက်သမား [အတွေ့အကြုံရှိသူ] [အတွေ့အကြုံမရှိသူ]
▼ Tobi လက်သမား [အတွေ့အကြုံရှိသူ] နေ့စဉ်လစာယန်း ၁၄၀၀၀ (သို့) ထိုထက်ပို + စွမ်းရည်လစာ [အတွေ့အကြုံမရှိသူ] နေ့လစာယန်း ၁၁၀၀၀ (သို့) ထိုထက်မက * အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်ပေါ် မူတည်၍ ညှိနှိုင်းနိုင်ခြင်းအတွေ့အကြုံမရှိသူသည်ရုံးတင်စစ်ဆေးသည့်ကာလ⇒ 14,000 ...
အဓိကအားဖြင့်တိုကျိုမြို့ရှိ Kanagawa၊ Saitama နှင့် Chiba စီရင်စုနယ်မြေများနှင့်နေရာများစွာရှိသည်။အလုပ်အတွက်အဘယ်သူမျှမချိုးရှိပါသည်! !! * ရုံး၌တွေ့ဆုံပါ။ (၁-၅၃-၆ Shiraitodai, Fuchu-shi, Tokyo) ...
Sugi Construction Co. , Ltd. အလုပ်များဟုတ်လား
Midoriya Co. , Ltd. အလုပ်များဟုတ်လား
Sowa Construction Co. , Ltd မှအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
Sakuraba Kogyo Co. , Ltd. ၏အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်များဟုတ်လား
Ishiwa Kogyo Co. , Ltd.
ခုတ်ခြင်းနှင့်ဖြိုဖျက်ခြင်းအလုပ်★နေ့စဉ်လစာ ၁၁-၁၈၀၀၀ ★အပတ်စဉ်ငွေပေးချေမှုဖြစ်နိုင်သည်။ကျယ်ပြန့်စွာမွေးစားခြင်းခံရသူများမှလက်မှုပညာရှင်များနှင့်မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာမိန်းကလေးများအထိ★ motiv စိတ်အားထက်သန်သူများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရာရာကိုအစမှ စ၍ သင်ကြားပေးမည်။ ★၎င်းသည်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသမ္မတဖြစ်သည်။ဘာကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ ★တစ်ချိန်တည်းတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်ကုမ္ပဏီများကိုရှာဖွေခြင်း
Hatsuri / ဖျက်သိမ်း
[ကုမ္ပဏီ] (၁) အတွေ့အကြုံရှိသူ - နေ့စဉ်လစာ ၁၃၀၀၀ ယန်းမှ ၁၈၀၀၀ ယန်း။ အရည်အချင်းနှင့်အရည်အချင်းများကိုသုံးသပ်ခြင်း ဦး စားပေးကုသမှု (၂) အတွေ့အကြုံမရှိသူ - နေ့စဉ်လစာယန်း ၁၁၀၀၀ ~ ☆သင်၏လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု ...
အဓိကအားဖြင့်ယိုကိုဟားမားမြို့၊ ကန်နာဂါစီရင်စုနှင့်တိုကျို၏ဆင်ခြေဖုံးများတွင်★ရုံးခန်းမှရရှိသောအစည်းအဝေး / မျှဝေမှု * ဆိုက်ပေါ် မူတည်၍ တိုက်ရိုက်ပြန်ပို့နိုင်သည်
Ishiwa Kogyo Co. , Ltd. ၏အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဟုတ်လား
M's Make Co. , Ltd. အလုပ်များဟုတ်လား
[Tobi] [ငြမ်း] [Earthwork] ဝန်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း။ယခုဝင်ငွေရသောအချိန်ပါ!
(XNUMX) Tobi ၏အကြီးအကဲ, (XNUMX) Tobi, (XNUMX) Earthwork
၁) Toko ☆အတွေ့အကြုံရှိသောအတွေ့အကြုံရှိသူအတွေ့အကြုံရှိသူ ၁၅၀၀၀ ယန်း (သို့) ထိုထက်ပိုသော (လျှော / ငြမ်း / သံမဏိဘောင်အရည်အချင်းပြည့်မှီသူ) အတွေ့အကြုံရှိသောယန်း ၁၄၀၀၀ (သို့) ထိုထက်ပိုသော (လျှော / ငြမ်းပုရွက်ဆိတ်)
Takaei Construction Co. , Ltd မှအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုဟုတ်လား
မြေလုပ်ငန်း / အထွေထွေ (14)
သံမဏိကိုယ်ထည် / လေးလံသောအလေးချိန် (6)
အမျိုးအစားအားဖြင့် Kanagawa စီရင်စုရှိအလုပ်များကိုချုံ့ပါ
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ / ဗိသုကာ (44)
လူမှုဖူလုံရေးအပြည့်အ ၀ တပ်ဆင်ထားသည် (39)
အလုပ်သင် / အတွေ့အကြုံမရှိသောကြိုဆိုခြင်း (34)
မည်သည့်အသက် (31) နှစ်
သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေမှာ "Kanagawa စီရင်စုဒါဟာ "ဖြစ်ပါတယ်။